सिजी नेटले ल्यायो ६ सय ४९ मा प्रति महिनामा ५० एमबीपीएसको इन्टरनेट – कालीगण्डकी पोष्ट
सिजी नेटले ल्यायो ६ सय ४९ मा प्रति महिनामा ५० एमबीपीएसको इन्टरनेट
चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले सिजीनेटको सेवामा नयाँ र सस्तो ‘सुपर सस्तो प्याकेज’ सार्वजनिक गरेको छ।
प्याकेज अन्तर्गत ग्राहकले मासिक ६ सय ४९ रूपैयाँमा ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सिजीका अनुसार यो प्याकेज १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र १ वर्षका लागि उपलब्ध छ।
त्यस्तै तीन महिनाको प्याकेज लिन चाहनेलाई १९ सय ४७ रुपैयाँमा ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने ६ महिनाको शुल्क तीन हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै वार्षिक ग्राहकले ७ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँमा यो प्याकेज खरिद गर्न सक्नेछन्।
कम्पनीका अनुसार यी प्याकेज लिन चाहने ग्राहले जडान खर्च र ड्रप वायरका साथै सिंगल ब्यान्ड राउटर निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कम्पनीले यसअघि नै प्रति महिना ९९९ रूपैयाँमा १२० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट वितरण गरिसकेको छ।
अपडेटः बालेन साहको कटाए २८ हजार बढी मत, केशव स्थापितको कति ?
केपी ओली जहाजमा, भीम रावल सडकमा
आज देखी मौन अवधि सुरु, के के गर्न पाइदैन?
नेपाली कांग्रेस पाल्पाका उम्मेदवार चयन
नेकपा एमाले रुरुक्षेत्र १ बाट वडा अध्यक्षमा नवराज बिकको उम्मेदवारी